Tọghata PDF gị ka ọ bụrụ Mobile, Web-Ready, Shareable Collateral | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 6, 2014 Douglas Karr
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ihe eji eme ihe, akwụkwọ akụkọ na ahịa na usoro PDF. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaọrụ nwere ndị na-agụ PDF n'oge a, ndị na-agụ akwụkwọ ahụ anaghị edozi maka ịgụ gafee ngwaọrụ nwere ike ịkekọrịta ha na mmekọrịta mmadụ na ibe ha ma ọ bụ tinye ha n'ime ọdịnaya gị.
Mpempe akwụkwọ dị mfe na-enye ngwa dị mfe ebe ị nwere ike bulite ma nọrọ n'ụlọ akwụkwọ nta emere site na PDFs gi ma obu bu ihe eji eme ya. Enwere ike idenye akwụkwọ nta, kụọ, tweeted, kesaa, emaili, tinye ma budata ya site na ndị ahịa ebe ọ bụla. I nwekwara ike inye njikọ maka ọdịda peeji nke maka ijide ndu.
Jiri njikọ njikọ anyị ma ị nwere ike ịnweta 55% Gbanyụọ nke ndenye aha afọ 1 maka SimpleBooklet HERO Plan.
A bụ ihe nnyocha video nke Mpempe akwụkwọ dị mfe:
Lelee Osisi Osisi na Simplebooklet's saịtị iji hụ nnukwu ihe atụ nke otu ndị ahịa si eji ikpo okwu. Nwere ike ịnwale ikpo okwu n'efu. Jide n'aka na ị jiri njikọ njikọ anyị ma ị nwere ike ịnweta 55% Gbanyụọ nke ndenye aha afọ 1 maka SimpleBooklet HERO Plan.
Tags: tọghata pdfekwentị mkpanaaka pdfmpempe akwụkwọ ire ereshareable pdfobere akwukwojiri okwuwhitepapers